Cylind Tin anogona, Tin anogona Container, Metal Ice Bucket, Tinplate Box - Baolai
2.5L Tin magaba zvokudya Grade dzinodyiwa Oil camelli ...
Inogona customized, isu vanotibatsira kwete kavha mudziyo, zvakawanda zvinogona Unganatsiridza zvigadzirwa penyu, akakodzera makemikari pendi, pendi, motokari pendi, mafuta injini, lubricating mafuta, ingi tins.
chigadzirwa siyana kwedu Specification zvakakwana, hwakanakisisa, ngura nemishonga, tinokukumbira kuti ubatane, musika kukura uye itsva pfungwa.
Cooking mafuta, namafuta tins, kushandisa chikafu-sosaiti tinplate zvinhu, hutano, zvakawanda zvakatipoteredza noushamwari.
Chero uri kutarisa kubudirira kana kusika, chikwata chedu vari-ruoko kuti rubatsiro. Kubva anotaurwa zvakaumbwa tins kuti nemamwe mazano.
Dongguan Baolai Metal anogona Co., Ltd. hwagadzwa muna 2012, kuti mumwe inozivikanwa tinplate kavha midziyo vagadziri mu China. Main zvigadzirwa ndiwo: dzinodyiwa & nemakemikari mafuta zvinogona, kumativi, mativi uye dzimwe mhando magaba, mhando kwakakwana uye nokurondedzerwa. fekitari Our ane simba R & D uye simba zvokugadzira zvinhu, yepamusoro zvokushandisa, vane boka mukuru nyanzvi uye michina vashandi. Ane 12 yemhando midziyo Kugadzirwa mitsetse yabva Germany, Japan, Taiwan uye dzimwe nyika, pamwe 150,000㎡ workshop uye nezuva kugadzirwa kukwanisa dzinopfuura 100,000 bv.